Maleeshiyaad hubeysan oo geystay weerar sababay dhimasho iyo dhaawac - Awdinle Online
Maleeshiyaad hubeysan oo geystay weerar sababay dhimasho iyo dhaawac
Wararka naga soo gaaaraya degaanka Xananbuure ee Gobolka Galgaduud ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay weerar sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ah.
Maleeshiyaad hubeysan ayaa waxaa la sheegay in ay rasaas ku fureen Gaari nooca Soomaalida u taqaano Hoomeyda, xilli uu marayay degaanka Xananbuure, waxaana rasaastaas ku geeriyooday Hal qof oo Haweeneey ah halka laba qof oo kale oo dumar ah ay ku dhaawacmeen.
Maleeshiyaadka ka dambeeyay falkaas ayaa Goobta ka baxsaday, waxaana la sheegay in arrintaasi ay salka ku heyso xiisad colaadeed oo u dhaxeysa laba beelood oo maal mahaan ka taagan degaanka Xananbuure ee gobolka Galgaduud.
Dhaawaca labada Dumarka ah ayaa waxaa la geeyay Isbitaalka guud ee Magaalada Cadaadio si halkaasi loogu daaweeyo, sida ay sheegeen goobjoogayaal ku sugan degaanka Xananbuure.
Wararka ayaa waxaa ay intasi ku darayaan in Gaarigii dhaawaca siday hadana maleeshiyaad hubeysan ay wadada u galeen ayna rasaaseeyeen, waxaana halkaasi ku geeriyooday Haweeneey kale iyo Nin gaariga la saarnaa.
Xiisad dagaal ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay Maanta ka taagan tahay degaanka Xananbuure ee Gobolka Galgaduud, iyada oo Maamulka Galmudug uusan ka hadlin dilalka muddo todobaad gudihiis ah ka dhacay degaanka Xananbuure iyo xiisada dagaal ee ka taagan.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo ka hadlay Guushii Joe Biden